Saint nke ụbọchị maka Jenụwarị 17: akụkọ banyere Saint Anthony nke Egypt | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Eke nke ụbọchị maka Jenụwarị 17: akụkọ banyere Saint Anthony nke Egypt
Ndụ Antonio ga echetara ọtụtụ mmadụ St. Francis nke Assisi. Mgbe ọ dị afọ iri abụọ, ozi ọma ozi ọma ahụ metụrụ Anthony n’obi, sị: “Gaa, ree ihe i nwere nye ya ndị ogbenye” (Mak 20:10), na o mere otú ahụ n’ezie site n’inye ya nnukwu ihe nketa. Ọ dị iche na Francesco n'ihi na ọtụtụ oge ndụ Antonio nọrọ naanị ya. Ọ hụrụ ụwa ka ọnyà jupụtara kpamkpam wee nye Nzukọ-nsọ ​​na ụwa ihe akaebe banyere ịta onwe onye ahụhụ, ịkwa akwa onwe ya na ekpere. Ma ọ dịghị onye senti na-emegide mmekọrịta mmadụ na ibe ya, Anthony dọtakwara ọtụtụ mmadụ n'ebe ọ nọ maka ọgwụgwọ na nduzi mmụọ.
Mgbe ọ dị afọ 54, ọ zara ọtụtụ arịrịọ ma guzobe otu ebe obibi ndị mọnk nke mkpụrụ ndụ ndị gbasasịrị. Ọzọkwa, dị ka Francesco, ọ tụrụ oke egwu "ụlọ ndị mara mma na tebụl edozi nke ọma".
Na 60, o nwere olile anya ịbụ onye nwụrụ n'ihi okwukwe ya na mkpagbu Rome megharịrị nke 311, na-ekpughere onwe ya n'ọdachi n'atụghị egwu ma na-enye ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ nkwado nke omume na nke anụ ahụ. Na 88 ọ na-alụ ọgụ ịjụ okwukwe ndị Aryan, nnukwu nsogbu ahụ nke Chọọchị were ọtụtụ narị afọ iji nwetaghachi. "Inyinya mule nke na-agba ụkwụ n'elu ebe ịchụàjà" na-agọnarị Chi nke Chukwu.
A na-ejikọta Antonio na nka na obe nwere akara T, ezì na akwụkwọ. Ezi na obe bu akara nke agha obi ike ya na ekwensu: obe bu uzo nke ike ya n’ebe ndi mo ojo no, ezi bu akara nke ekwensu n’onwe ya. Akwụkwọ ahụ na-echeta mmasị ya maka "akwụkwọ nke okike" karịa okwu e biri ebi. Antonio nwụrụ mgbe ọ nọ naanị ya mgbe ọ dị afọ 105.
N’oge nke chiri ọchị n’elu echiche nke ndi mo ojo na ndi mo-ozi, onye amara na enwere ikike n’ebe ndi mo ojo agha aghagh ime ka anyi kwusi. Na ubochi ndi mmadu na ekwu maka ndu dika “oso ka ogha n’iru”, ndi raara ndu ha nye onwe ha niile na ikpe ekpere na arutu aka n’otu ihe di nkpa nke ndu ndi Kristian n’ime oge nile. Ndụ Anthony dị ka anụ ụlọ na-echetara anyị na oke mgbagha anyị na mmehie na mkpokọta nke ntinye anyị nye Kraịst. Ọbụna n’ime ụwa ọma Chineke, enwere ụwa ọzọ nke ụkpụrụ ụgha ya na-anwa anyị ọnwụnwa mgbe niile.
Saint Anthony nke Egypt bụ onye nchebe nke:
Ndị na-egbu anụ